Intsha kuAirbnb "The Hoov" Kanye ngexesha leBhola ekhatywayo
IHoov yeyona ndawo igqibeleleyo yazo zonke izinto OU! Ifakwe ibhloko enye emazantsi ekhampasi kunye nohambo olufutshane oluya kwibala lemidlalo le-OU, le ndawo ifanelekile kusuku lomdlalo, ukulandelelanisa, ukutyelela umfundi wakho we-OU, iindibano zosapho okanye ukubaleka ngempelaveki.
IHoov inobubele kusapho kwaye isandula ukulungiswa. Indawo engaphandle ifanelekile kwiindibano, igcwele idesika entsha, idike, umgodi womlilo, igrill kunye nendawo yokuhlala.
Uhambo olufutshane ukuya ekhampasini, ibala lemidlalo le-OU kunye nekona yekhampasi. Yonke into i-OU ikwimayile enye yendlu yethu. Sisondele kakhulu kwikhampasi kangangokuba iyadi yethu yangaphambili ibe yindawo yokupaka ngeentsuku zomdlalo wasekhaya (ungakhathazeki, aziphazamisi indawo yethu yokupaka iindwendwe)
Ifanelekile kwiindibano zosapho kunye neentsuku zomdlalo!
Akukho maqela ekholejini/amaqela. Akukho ziganeko zoluntu emva kwentsimbi ye-11pm. Siyazithanda iindibano zosapho kunye nabahlobo ezonwabisayo kodwa ngenxa yentlonipho kubamelwane bethu, sinomgaqo-nkqubo oQINILEYO wokungabi nambutho. Iindwendwe ziphantsi kokukhutshwa ngoko nangoko ukuba lo mgaqo wophulwe.
∙Indlela enkulu yokuqhuba inokubamba iimoto ezili-9
∙Indawo yekona eneyadi enkulu yangaphambili kunye neyadi ebiyelwe ngepikethi engasemva, umgangatho, indawo yokucima umlilo, igrill, icornhole, indawo yokuhlala, izibane zentambo ziyenza ibe yiholideyi.
∙1 Ibhedi yokumkanikazi
• Ibhedi eyi-Queen e-1 kunye ne-sofa futon (iwele)
∙Iibhedi ezingamawele kunye neFuton (egcweleyo) - eli gumbi linobumfihlo obulinganiselweyo
∙1 Queen kunye ne-Twin day bed
Amagumbi okuhlambela amabini agcweleyo (enye ineshawari kwaye enye ineshawa/ibhafu)
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Norman